June 2016 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
ဒီဇာတ်ကားလေးဆိုရင်အားဖြင့် IMDb မှာ Rating: 8.5 ရရှိထားတဲ့ Drama, Adventure, Family ဇာတ်ကား အမျိုးစားလေးပါ ။ မင်းသားကြီး-Jean Reno ...
Brothers of the Wind (2015) ရုပ်သံ/အကြည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:40 PM Rating:5ဒီဇာတ်ကားလေးဆိုရင်အားဖြင့် IMDb မှာ Rating: 8.5 ရရှိထားတဲ့ Drama, Adventure, Family ဇာတ်ကား အမျိုးစားလေးပါ ။ မင်းသားကြီး-Jean Reno ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:40 PM No comments:
PC Cleaner Pro 2016 v14.0.16.6.5 လိုင်စင်ကီးဖရီး[နောက်ဆုံးဗားရှင်း]
ကွန်ပြူတာလေးလံမှုများအတွက် Speed Up to 300% ထိ Faster PC ကိုမြန်ဆန်ပေါ့ပါးစေမဲ့ လုပ်ပေးပြီး PC Cleaner Pro 2016 ဖရီးအမြဲသုံးချင်သူတွေ...
PC Cleaner Pro 2016 v14.0.16.6.5 လိုင်စင်ကီးဖရီး[နောက်ဆုံးဗားရှင်း] Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:08 PM Rating:5ကွန်ပြူတာလေးလံမှုများအတွက် Speed Up to 300% ထိ Faster PC ကိုမြန်ဆန်ပေါ့ပါးစေမဲ့ လုပ်ပေးပြီး PC Cleaner Pro 2016 ဖရီးအမြဲသုံးချင်သူတွေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:08 PM No comments:
အသုံးဝင်သည့် Tools စုစုပေါင်း ၁၃ မျိုးပါဝင်သည့် App ဖြစ်သည်။ တိုင်းတွာခြင်းစနစ်၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၊ QR scanner, Image to PDF converter, ...
Useful Tools ၁၃ မျိုး အခမဲ့ Download Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:22 PM Rating:5အသုံးဝင်သည့် Tools စုစုပေါင်း ၁၃ မျိုးပါဝင်သည့် App ဖြစ်သည်။ တိုင်းတွာခြင်းစနစ်၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီး၊ QR scanner, Image to PDF converter, ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:22 PM No comments:
Samsung Galaxy S7 Edge ဖုန်းက Batman ဗားရှင်းနဲ့ဆိုဘယ်လောက်မိုက်မလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ဖူးပါသလား။ အခုတော့ Samsung ဟာ Warner Bros နဲ့ ပူးပေ...
Batman ဗားရှင်း Samsung Galaxy S7 Edge ကိုထုတ်လုပ် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:10 PM Rating:5Samsung Galaxy S7 Edge ဖုန်းက Batman ဗားရှင်းနဲ့ဆိုဘယ်လောက်မိုက်မလဲဆိုတာ တွေးကြည့်ဖူးပါသလား။ အခုတော့ Samsung ဟာ Warner Bros နဲ့ ပူးပေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:10 PM No comments:
စမတ်ဖုန်းတွေမပေါ်ခင်တုန်းက၊ လူတိုင်းရဲ့အသည်းစွဲဖုန်းတွေက ခေါက်ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး၊ ယခုအချိန်ထိ ခေါက်ဖုန်းကို တမ်းတလွမ်းဆွတ်မိတဲ့သူတွေရှိတ...
မျက်နှာပြင်အကြီးစားနဲ့ ဒီဇိုင်းဆန်းခေါက်ဖုန်းတစ်လုံးကို Oppo စမ်းသပ်နေ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:09 PM Rating:5စမတ်ဖုန်းတွေမပေါ်ခင်တုန်းက၊ လူတိုင်းရဲ့အသည်းစွဲဖုန်းတွေက ခေါက်ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး၊ ယခုအချိန်ထိ ခေါက်ဖုန်းကို တမ်းတလွမ်းဆွတ်မိတဲ့သူတွေရှိတ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:09 PM No comments:
iPhone7ဟု ယူဆရသည့် ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာသော ဓာတ်ပုံများအရ မျိုးဆက်သစ် iPhone တွင် နားကြပ်ပေါက် ပါဝင်လာခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့...
နားကြပ်ပေါက်မပါဝင်သော iPhone7ကိုယ်ထည်ဓာတ်ပုံများ ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:08 PM Rating:5iPhone7ဟု ယူဆရသည့် ပေါက်ကြားထွက်ပေါ်လာသော ဓာတ်ပုံများအရ မျိုးဆက်သစ် iPhone တွင် နားကြပ်ပေါက် ပါဝင်လာခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။ သို့...
လက်ရှိတွင် Windows 10 အသုံးပြုနေသော ထုတ်ကုန်များထံ Windows 10 Anniversary Update ဖြန့်ချိမှုကို သြဂုတ်လ ၂ ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန် စ...
Windows 10 Anniversary Update ကို သြဂုတ်လ ၂ ရက်တွင် အခမဲ့ဖြန့်ချိမည် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 8:01 PM Rating:5လက်ရှိတွင် Windows 10 အသုံးပြုနေသော ထုတ်ကုန်များထံ Windows 10 Anniversary Update ဖြန့်ချိမှုကို သြဂုတ်လ ၂ ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန် စ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 8:01 PM No comments:
လင်းနစ် - ရင်ဘတ်ထဲကအိပ်မက်ဟောင်း
လင်းနစ်- ရင်ဘတ်ထဲကအိပ်မက်ဟောင်း ================ တေးရေး- လင်းနစ်၊နေငယ်၊သူရ Music ;Sound Square Studio;pro Mixing; ကျော်ဇေယျ...
လင်းနစ် - ရင်ဘတ်ထဲကအိပ်မက်ဟောင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:50 PM Rating:5လင်းနစ်- ရင်ဘတ်ထဲကအိပ်မက်ဟောင်း ================ တေးရေး- လင်းနစ်၊နေငယ်၊သူရ Music ;Sound Square Studio;pro Mixing; ကျော်ဇေယျ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:50 PM No comments:
မျိုးကျော့မြိုင် - လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ
မျိုးကျော့မြိုင် - လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ ============== ၀၁။ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ ၀၂။ မင်းလေးချစ်တတ်ရင် ၀၃။ အချစ်သီချင်း ၀၄။ စောစောစီး...
မျိုးကျော့မြိုင် - လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:40 PM Rating:5မျိုးကျော့မြိုင် - လူဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခ ============== ၀၁။ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ ၀၂။ မင်းလေးချစ်တတ်ရင် ၀၃။ အချစ်သီချင်း ၀၄။ စောစောစီး...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 7:40 PM No comments:
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ Viber Public Chat ဖွင့်လှစ်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ Viber တွင် public Chat ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း အဆိုပါ ရုံး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားချက်အရ သိရသည်။ Myanmar Pre...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ Viber Public Chat ဖွင့်လှစ် Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:37 PM Rating:5နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ Viber တွင် public Chat ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း အဆိုပါ ရုံး၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ထုတ်ပြန်ထားချက်အရ သိရသည်။ Myanmar Pre...
အင်တာနက် ဖရီးသုံးနိုင်တဲ့ - Your Freedom VPN Client Version 20160628-01 APK (ဖုန်း root ရှိထားဖို့လိုပါသည် )
Jun 28 2016 နေ့မှာထွက်ရှိလာ မိမိတို့ဖုန်းတွေမှာ အင်တာနက် ဖရီးသုံးချင်ကြတဲ့၊ အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Your Freedom VPN ...
အင်တာနက် ဖရီးသုံးနိုင်တဲ့ - Your Freedom VPN Client Version 20160628-01 APK (ဖုန်း root ရှိထားဖို့လိုပါသည် ) Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:06 PM Rating:5Jun 28 2016 နေ့မှာထွက်ရှိလာ မိမိတို့ဖုန်းတွေမှာ အင်တာနက် ဖရီးသုံးချင်ကြတဲ့၊ အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Your Freedom VPN ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 11:06 PM No comments:
CyberLink ဆော့ဝဲလ်တစ်ခု လို Professional ကျကျ ဖုန်းမှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် - PhotoDirector Photo Editor Latest Version 4.0.2 APK -နောက်ဆုံးဗားရှင်း
June 28 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Android / Tablet ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင် မယ့် နောက်ဆုံးထွက် update ဖြစ်တဲ့ PhotoDirector Photo Editor ...
CyberLink ဆော့ဝဲလ်တစ်ခု လို Professional ကျကျ ဖုန်းမှာအသုံးပြုနိုင်မယ့် - PhotoDirector Photo Editor Latest Version 4.0.2 APK -နောက်ဆုံးဗားရှင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:26 PM Rating:5June 28 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Android / Tablet ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင် မယ့် နောက်ဆုံးထွက် update ဖြစ်တဲ့ PhotoDirector Photo Editor ...
ဓာတ်ပုံတွေကို လှသွားအောင် အလန်းဆုံးဖန်တီးနိုင်တဲ့ - Photo Editor Pro Latest Version 2.32 APK
June 29 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Android ဖုန်း tablet ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင် မယ့် နောက်ဆုံးထွက် update ဖြစ်တဲ့Photo Editor Pro APK ...
ဓာတ်ပုံတွေကို လှသွားအောင် အလန်းဆုံးဖန်တီးနိုင်တဲ့ - Photo Editor Pro Latest Version 2.32 APK Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:54 PM Rating:5June 29 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့ Android ဖုန်း tablet ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိုင် မယ့် နောက်ဆုံးထွက် update ဖြစ်တဲ့Photo Editor Pro APK ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:54 PM No comments:
Candy Camera Latest Version 2.96 APK နောက်ဆုံးဗားရှင်း
Jun 28 2016 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့Android/Tablet ဖုန်းတွေမှာ Candy Camera Apk အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Update အသစ်လေးရလာလ...
Candy Camera Latest Version 2.96 APK နောက်ဆုံးဗားရှင်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 9:30 PM Rating:5Jun 28 2016 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့Android/Tablet ဖုန်းတွေမှာ Candy Camera Apk အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Update အသစ်လေးရလာလ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 9:30 PM No comments:
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် အသုံးပြုချင်ကြသူတွေပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် Facebook Account နှစ်ခုကို...
Parallel Space－Multi Accounts Latest Version 2.2.4961 APK Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:29 PM Rating:5ကျွန်တော်တို့တွေဟာ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် အသုံးပြုချင်ကြသူတွေပါ။ ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် Facebook Account နှစ်ခုကို...
Clean Master (Boost & AppLock) Latest Version 5.12.7 APK
Jun 28 2016 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့AndroidOS/Tabletဖုန်းတွေမှာ CleanMasterBoostAppLock_v5.11.8 Apk အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက်...
Clean Master (Boost & AppLock) Latest Version 5.12.7 APK Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 7:00 PM Rating:5Jun 28 2016 နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့AndroidOS/Tabletဖုန်းတွေမှာ CleanMasterBoostAppLock_v5.11.8 Apk အသုံးပြုလိုသူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက်...
ဖုန်းပါဝါခလုတ်ပျက်သွားလို့ unlock လုပ်လို့မရတော့ဘဲ၊ စိတ်ညစ်နေရသူတွေအတွက် အမိုက်စား Android app လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Air Unloc...
မိုက်ခရိုဖုန်းအပေါက်ထဲကိုလေနဲ့မှုတ်တာနဲ့Unlockလုပ်ပေးမဲ့android app Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:00 PM Rating:5ဖုန်းပါဝါခလုတ်ပျက်သွားလို့ unlock လုပ်လို့မရတော့ဘဲ၊ စိတ်ညစ်နေရသူတွေအတွက် အမိုက်စား Android app လေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Air Unloc...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:00 PM No comments:
Asus Zenfone Auss 4.5(T00Q) Android 4.4.2 Root လုပ်နည်း
Asus Zenfone 4.5(T00Q) ဖုန်းကို Root လုပ်ချင်လို့ဆိုပြီး လာအပ်သွားတော့လည်း ကလစ်တော့တာပဲပေ့ါ။ ဗားရှင်းကတော့ Android 4.4.2 Root ပါ One...
Asus Zenfone Auss 4.5(T00Q) Android 4.4.2 Root လုပ်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:51 PM Rating:5Asus Zenfone 4.5(T00Q) ဖုန်းကို Root လုပ်ချင်လို့ဆိုပြီး လာအပ်သွားတော့လည်း ကလစ်တော့တာပဲပေ့ါ။ ဗားရှင်းကတော့ Android 4.4.2 Root ပါ One...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:51 PM No comments: